တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြိုလူမျိုးတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သတင်းအပါအဝင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြိုလူမျိုးတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှေ...
10 ธ.ค. 2561 - 09:16 น.
ရခိုင် ပဋိပက္ခတွင်းက မောင်တောကရွာတွေထဲ လုံခြုံရေးယူထားသူ အစိုးရလက်နက်ကိုင်များ
(၁) တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြိုလူမျိုးတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ဖားဝမ်းချောင်းကျေးရွာက တောင်ပေါ်မြိုတိုင်းရင်းသား ၄၀ ကျော်ဟာ သူတို့ရွာကို စွန့်ခွာပြီး လုံခြုံရာကို ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရပါတယ်။
အခုထွက်ပြေးနေသူတွေဟာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် တောင်ဖျားချောင်း အဖျားပိုင်းမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် တောင်ပေါ် မြိုတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့နေထိုင်ရာ ဖားဝမ်းချောင်း ကျေးရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကတော့ ထွက်ပြေးလာသူတွေဟာ အထက် သင်ပုန်တန်း ကျေးရွာကို ရောက်ရှိလာတယ်လို့ ရွာခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးသောကြာဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲဟာသူတို့ရွာ အနီးက မဲခချောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကြီးသံတွေ ကြားတဲ့အတွက် ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုတိုက်ပွဲတွေဟာ အဲဒီဒေသမှာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ ရခိုင် တပ်မတော် (AA) ကြား ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်ပြေးလာတဲ့အထဲ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေဟာ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်သံတွေလည်း ကြားရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘူးသီးတောင်- ရသေ့တောင် ယိုးချောင်းတံတားအနားက ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းပေါ်မှာလဲ ဆွဲမိုင်းနဲ့ စစ်ကားတွေကို တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေကြား အထူးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။
ပျောက်နေတဲ့ မြို အမျိုးသမီးရဲ့ အလောင်း ပြန်တွေ့
မြို တိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
(၂) လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းရဲ့ နှစ် ၇၀ ပြည့်
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ (ဒီနေ့) ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း ထွက်ပေါ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေ အထောက်အကူပြု ကွန်ရက်ကနေ ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပေါ်မှာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ အရှိန်ရနေသလို တဘက်မှာလဲ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ၊ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးမှာ ထင်ရှားစွာ ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အချက် (၈) ပါဝင်ပြီး ဝေးလံတဲ့ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ အခြားဘာသာယုံကြည်သူတွေကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ ဗလီနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်း ဘုရားစေတီတည်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဝါဒသင်ကြား ပို့ချလျက်ရှိကြောင်း အကာအကွယ်ယူကာ အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်ကို ဆန့်ကျင်လျက် ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုများ ပျံ့နှံ့အောင် ပြုခြင်း ၊ အမုန်းစကား ပြောဖို့ လှုံ့ဆော်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကို ကြပ်မတ်စစ်ဆေး အရေးယူသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
(၃) တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှု မပြေလည်ရင် အကောက်ခွန်တိုးမြှင့်မည်
အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြား ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဟာ မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိပဲ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ မရှိဘူးလို့ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် ရောဘတ်လိုင်သီဇာက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပေမယ့် မတ်လ ၁ ရက်နေ့အထိ တိုင် သဘောတူညီချက် တစုံတရာ မရဘူးဆိုရင် အမေရိကန်ဟာ တရုတ်ကုန်တွေကို ထပ်ဆောင်းခွန်ကောက်ခံတာ လုပ်သွားမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဟွာဝေးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမှူးချုပ်ကို ကနေဒါက ဖမ်းဆီးခဲ့မှုဟာ ကုန်သွယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ပြောထားပါတယ်။
(၄) ဟွာဝေးကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာရေးမှူးချုပ် အာမခံတင်
အမေရိကန်နဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဟွာဝေးကုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာရေးမှူးချုပ် မင်ဟောင်ဝေက အာမခံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်က အီရန်အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး မစ္စမန်ကို ဖမ်းဖို့ အမေရိကန်က ကနေဒါကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
ဗန်ကူးဗားက တရားရုံးမှာ အာမခံလျှောက်ထားတဲ့ မစ္စမန်ကတော့ သူ့မှာ မပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောထားသလို အမေရိကန်ကို လွှဲပြောင်းခံရတယ်ဆိုရင်လည်း တရားရေးအရ ပြန်လည်ရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံကလည်း မစ္စမန် ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီး မလွှတ်ပေးဘူးဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံတို့အနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေ ရှိလာမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မြိုလူမျိုးတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သတင်းအပါအဝင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ